सावधान! अनावस्यक यौनशक्ति बर्धक औसधिले तपाइको यौन जीवन खत्तम होला ~ Khabardari.com
सावधान! अनावस्यक यौनशक्ति बर्धक औसधिले तपाइको यौन जीवन खत्तम होला
स्तन - सानो ठूलो टाइट पारी गोलाइ मिलाउन ।
अखबारहरूमा मात्र होइन, विभिन्न हेल्थ सेन्टरका होर्डिङ बोर्डमा पनि यस्ता सन्देश पढ्न पाइन्छ । जस्तो, खिचापोखरीस्थित एउटा सेक्सोलोजी सेन्टरको होर्डिङ बोर्डमा लेखिएको छ- स्तन तथा लिङ्गको आकार परिवर्तन गर्ने र कडा बनाउने, यौन दुर्बलता तथा शीघ्र पतन हुनबाट जोगाउने लगायत सबैखाले यौन समस्याहरूको उपचार अब एकै ठाउँमा ।
उपत्यकामा यौन शक्ति प्रबर्द्धक भनेर थरीथरीका औषधि बिक्री हुने गरेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार, अवैध रूपमा भित्र्याइएका यस्ता कतिपय औषधि एक हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । विभागबाट स्वीकृति प्राप्त औषधि भने बजारमा तीन सयदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । यस्ता मान्यता प्राप्त औषधिमा एमेग्रा, आर्याग्रा, कोभर्टा, मेडिग्रा, नेग्रा, पेनज्वे, पिइग्रा, सिलाग्रा, सिल्डाफिल, एक्सट्रा र एक्ससाइट रहेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागले केही समयअघि गरेको अनुगमनबाट नेपालका बजारमा अवैध यौनवर्द्धक औषधिमा पेनग्रा, भिस्टाग्रा, डा. एक्स, भिगोरा, जेनेग्रा र भायग्रा फेला पारेको थियो । भियाग्राकै रूपमा प्रयोग हुने आयुर्वेदिक औषधि पौरुष जीवनसमेत फेला पारेको थियो । शीघ्र पतन हुनबाट रोक्ने, लामो समयसम्म यौनसम्पर्क राख्न सक्ने तुल्याउने हर्बल लिभित्रा, हर्मोटिक्स, स्पेसल मेलकप, म्याक्सम्यान क्याप्सुल लगायतका औषधिबारे भने विभागले अनभिज्ञता जनाएको छ ।
स्तन तथा लि्ङगको आकार प्रकार बढाउने र कडा पार्ने पेनिस तथा प्रेसर पम्प, डिमतेल, महिलाको यौनाङ्ग कडा बनाउने भिग हर्वेग्स, सुडो लुस्तान लगायतका औषधि उपकरणका सम्बन्धमा विभागले केहीलाई स्वीकृति दिए पनि केहीको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भएको छ ।
यस्ता बस्तुहरू खरिद गर्न पुरुषहरू बिक्री केन्द्रमै पुग्छन् भने महिलाहरूले फोनबाट औषधि मगाउने गर्दछन् । राजधानीमा मात्र करिब डेढ सय वटा पसल तथा टीभी सप केन्द्रबाट यस्ता औषधि तथा यौनजन्य सामग्री बिक्री हुने गरेका छन्् ।
यौनवर्द्धक औषधिका नाममा थाइल्यान्ड, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चीन लगायतका विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएका 'औषधि'हरू चिकित्सकको सिफारिसविना नै प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । राजधानीका धेरैजसो औषधि उपचार केन्द्रले आफूखुसी त्यस्ता 'औषधि' बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागले भने यौनशक्तिवर्द्धक औषधिका रूपमा अवैध रूपमा औषधि भित्र्याउनेमाथि कारवाही भइरहेको जनाएको छ । विभागको अनुगमन तथा निरीक्षण शाखाले आˆनो वेबसाइट मार्फत सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त औषधिको सूची सार्वजनिक गरेको सो शाखाका प्रमुख पद्म पौडेल बताउँछन् ।
शारीरिक सम्बन्ध तथा यौन सन्तुष्टिका लागि एलोपेथिकमा गोली तथा चक्की र हर्बलमा धूलोमा पाइने यस्ता औषधिको प्रयोगले क्षणिक रूपमा भए पनि आनन्द दिने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । लिभित्रा नामको धूलो औषधि खाँदै आएका पदम पुलामी यौन समस्यामा सुधार आएको अनुभव सुनाउँछन् । फिटनेस सप धुम्बाराहीमा भेटिएका पुलामीलेे चिकित्सककै सल्लाहमा औषधि खाएको दाबी पनि गरे ।
स्तन तथा लिङ्ग बढाउन प्रयोग हुने पम्प र क्रिम पनि क्षणिक समयका लागि भएको उपभोक्ताहरू स्वीकार्छन् । हप्ता/हप्ता दिनमा प्रेसर पम्प गरिरहनु पर्ने र क्रिमले मसाज गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।
औषधिको प्रयोगले स्तन तथा लिङ्गको आकार प्रकार बढ्ने वा घट्ने, यौनाङ्ग 'टाइट' हुने कुरामा चिकित्सकहरू नै विश्वस्त छैनन् । यस्ता केन्द्रहरूबाट क्षणिक राहत प्राप्त भए पनि दीर्घकालमा प्रतिकूल असर पार्ने चिकित्सकहरूको धारणा छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक
डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट यौन उत्तेजनाका लागि औषधिको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि घातक हुने बताउँछन् ।
कामको व्यस्ततासँगै शारीरिक तथा मानसिक तनावका कारण यौन दुर्बलता देखिनु स्वाभाविक भएको र महिला तथा पुरुष दुवैमा यस्तो समस्या हुने पनि डा. विष्ट बताउँछन् ।
डा. विष्टका अनुसार, महिलाको तुलनामा पुरुषहरू छिटो खुल्ने भएकाले पुरुषमा यस्तो समस्या बढी देखिएको हो तर यौनजन्य समस्या औषधिको प्रयोगले निको हुन्छ भन्नु भ्रम मात्र हो । यसका लागि मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनु पर्छ ।
यस्ता औषधिको प्रयोगले १२ देखि २४ घण्टासम्म उत्तेजना बढाउने भएकाले स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर पार्ने गरेको हो ।
"औषधि तथा क्रिम र पम्पको प्रयोग दीर्घकालीन उपचार होइन," मनोरोग विशेषज्ञ डा. विदुर वस्ती भन्छन् । सुखी दाम्पत्य जीवनका लागि शारीरिक सम्बन्ध 'अनिवार्य' जस्तै हो तर त्यसका लागि मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ र फूर्तिलो हुनुपर्छ, डा. वस्तीको भनाइ छ । यौन दुर्बलता घटाउन र शीघ्र स्खलन रोक्न औषधि खानु त अल्पकालीन उपाय मात्र हो, यो दीर्घकालका लागि हुँदैन ।
भियाग्राको प्रयोगबाट मानिसको नसा फुलेर रक्तचाप बढाइदिने हुँदा मुटु नै बन्द हुनसक्ने खतरा छ । कहिलेकाहीँ त यौन सम्बन्ध राख्दा राख्दै ज्यानै जाने पनि हुन्छ । औषधिको 'साइड इफेक्ट' बाट मानिसको अनुहार सुन्निने, टाउको दुखिरहने, आँखा धमिलो हुने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् । यसैले मुटु रोगका बिरामीहरूले चिकित्सकको परामर्शविना यस्ता यौनवर्द्धक औषधिहरूको प्रयोग गर्नु भनेको काल निम्त्याउनु बराबर हो ।
खिचापोखरीस्थित कन्डम हाउससँगै रहेको सेक्सोलोजी सेन्टरले यस्तो समस्याबाट पीडितलाई औषधिभन्दा पनि यौन परामर्श दिने गरेको बताएको छ । यौन विशेषज्ञ डा. एन्जल मगरको परामर्शमा सेवाग्राहीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पूर्ण बनाउने गरेेको दाबी केन्द्रको छ । केन्द्रले आफूले बिक्री वितरण गर्ने औषधि मानव स्वास्थ्यका लागि उपयोगी र प्रभावकारी भएको दाबी समेत केन्द्रको छ ।
Source: Yuwamanch, jestha, 2069